ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5လူတိုင်းသည်တို့သည်စစ်မှန်သောထင်ကြောင်းချိန်းတွေ့အကြောင်းဒဏ္ဍာရီ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 22 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
sitcoms ထံမှအချစ်ဟာသမှမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများထံမှပုံပြင်များမှ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ချိန်းတွေ့ ပတ်သက်. တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ-အသိအမှတ်ပြုသည်အမှန်တရားတချို့ကိုသိ. သို့သော်, သိပ္ပံပညာကဤအများစုအညီ “အမှန်တရားတွေကို” မှားဖြစ်ကြောင်း. ဒါကြောင့်သင်ဟာတကယ်သင် ပြု. ထင်ထားတာထက်အချစ်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုလျော့နည်းသိ, အခုချိန်အထိ.
လူအများအထင်လွဲ #1: Gamer အထီးကျန်ကညာ ဖြစ်..
ဟောလိဝုဒ်မှတဆင့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်သိ “nerdy က စား. တစ်ဦး boob ကိုတို့ထိဖူး” အဆိုးမြင်မှိုင်း. ပို., ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုက စား. ကြားရတဲ့အခါ, အဘယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာသူတို့ရဲ့မိဘ၏မြေအောက်ခန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေမည့် Xbox ချက်တင်စကားပြောဆိုမှုပါဝင်သည်ဟာအလွန်ပါးလွှာသောသို့မဟုတ်အဆီလူကိုစဉ်းစားလေ့. သိပ္ပံပညာ၏အဆိုအရ, အဲဒီ nerdy ဂိမ်း Non-ဂိမ်းထက်ရက်စွဲများအပေါ်ထွက်သွားကြဖို့ပိုများပါတယ်. နောက်ထပ်, ထဲမှာ Multiplayer ဂိမ်းထဲမှာမြင့်တက်လာသည့်အပြင်ကြီးထွားလာဂိမ်းကစားခြင်းဈေးကွက်နဲ့, ဂိမ်းကစားခြင်းဟာတကယ်တော့တစ်ဦးလူကြိုက်များရေခဲကျူးသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏. လည်း, ခင့်လူမျိုး၏မေတ္တာ၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလဲသေကြပြီဘယ်နေရာမှာအွန်လိုင်းဂိမ်းအကြောင်းကိုမေ့လျော့မခံပါစေ.
လူအများအထင်လွဲ #2: အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မသာတစ်ဦးသည်ပြီးခဲ့သည့်အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်ပေမယ်သာရှုံးနိမ့်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှု.
ကံမကောင်းစွာပဲ, untruthful profiles များအားလုံးအပြင်ကိုအပူတပြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှစ်ပေါင်းများအတွက်ဆိုးဝါးသောအရက်ပ်ကိုဆည်းပူးခဲ့သည်. ပုံမှန်အားဖြင့်, ကျနော်တို့ရဲ့စိတ်၌သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေရန်နောက်ဆုံးသောကျုံးကဲ့သို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ကြပါတယ်င်; သို့သော်, ဤရှုထောင့်မှားဖြစ်ကြောင်း. ငါးချိန်းတွေ့ဆိုက်အသုံးပြုသူများအတွက်တဦးတည်းအွန်လိုင်းသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေကြောင်းပြသကြပြီဟုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများလည်းရှိခဲ့ဖူးသည်. လည်း, 94% အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးသောလူရဲ့ဒုတိယရက်စွဲပေါ်တွင်ထွက်သွားမည်, အော့ဖ်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်အဘယ်သူသည်လူများ၏ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုလမ်းဖြစ်သည့်. အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား? အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကွန်ပျူတာတစ်ခုဖြင့်သောကြောင့်,, လူတွေကသူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ပိုမိုရိုးသားမှုနှင့် upfront ဖြစ်လေ့ “ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့စကားပြောနေတာ”. ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြည့်ပါ, သင့်ဘားမှာတွေ့ဆုံခဲ့သူတစ်ဦးဦးရဲ့ရန်ကိုယုံပါဖိတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း? အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းရင်းမှာ Self-တည်တံ့ခိုင်မြဲနှင့် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာကြောင်းခြင်းဖြစ်သည်. သင်သည်သင်၏တူညီသောအကျိုးစီးပွားရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးသည်အလွန်မြင့်မားသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ကြောင်းအခွင့်အလမ်း.
လူအများအထင်လွဲ #3: ဆက်ဆံရေး, အမျိုးသမီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြပြီးယောက်ျားယုတ္တိရှိပါတယ်.
ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလေးကိုကျော်မျက်ရည်ကျသို့ bursting သို​​့မဟုတ်အစဉ်အမြဲအမျိုးသမီး၏နှလုံးအနိုင်ရနေချိန်တွင်ထိုလူကိုသတိမမူနှင့် suave ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်နေစဉ်ဆက်ဆံရေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာကြည့်ဘို့အကောင့်ဖွင့်သောမရေမတွက်နိုင်သောရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲကိုမြင်ရပါတယ်. သိပ္ပံယောက်ျားကပိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအအမျိုးသမီးတွေထက်ဆက်ဆံရေးဟာဒရာမာကြောင့်ထိခိုက်ကြောင်းဆိုသည်, သူတို့့ကမပြဘူး. အမျိုးသမီးများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကကောင်လေးနှောင့်ရှက်လာအထူးသဖြင့်မိသားစုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေအများကြီးအဘို့အခွင့်ပြုခြင်းမိတ်ဆွေများကိုအနီးကပ်ဆက်ဆံမှုရှိသည်လေ့. ယောက်ျားတွေပဲသူတို့အပေါ်မှာအထူးသဖြင့်ခက်ခဲတိုက်ပွဲအောင်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အတွက်ရင်ဖွင့်လေ့.
လူအများအထင်လွဲ #4: အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအချစ်ဇာတ်လမ်းတဦးသေဆုံး.
အမျိုးသမီးရေးရာလှုပ်ရှားသူများသူတို့ကိုဖြည့်စွက်ရန်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်လူကိုမလိုအပ်ပါသောသူလွတ်လပ်သောအမျိုးသမီးများအစဉ်အဆက်တလျှောက်လုံးရွယ်နေကြပါတယ်သောအဆိုးမြင်မှိုင်းနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေသည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားအမျိုးသမီးရေးရာလှုပ်ရှားသူများသောမိန်းမတို့ကိုတစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုမကြာခဏမထက်. အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူလက်ထပ်နေသောအမျိုးသားများဟာသူတို့ရဲ့လိင်အသက်ကိုမနေသောသူတို့အား၎င်းထက် ပို. စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ. ဒါကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးရေးရာလှုပ်ရှားသူများ flannel အဖြစ်မြင်ကြသည်နေစဉ်, တကယ်တော့အမှုကိစ္စမရှိလှကြောင်း mannish အမျိုးသမီးများ.
လူအများအထင်လွဲ #5: လက်မထပ်မီအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သောသူစုံတွဲများပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ထားရှိပါတယ်.
လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကွာအတူတူနေစရာအရပ်ကိုလာပြီတစ်ခုလက်မထပ်ရသေးသူဇနီးမောင်နှံသည်အပြစ်တရားတွင်နေထိုင်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်ကလုနီးပါးသဘာဝကျပါတယ်. ဒါဟာကွာရှင်းအတွက်အဆုံးသတ်နိုင်မယ့်ဥပဒေရေးရာကတိကဝတ်အောင်ရှေ့၌သင်တို့သိသာထင်ရှားသောအခြားတွေနဲ့ရွှေ့ဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံပေါ်. ဒီဘက်ပါ, မစ္စတာလျှင်သင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်. ညာဘက်အမှန်တကယ်မစ္စတာဖြစ်ပါသည်. မှန်သော. သိပ္ပံပညာ၏အဆိုအရ, မင်္ဂလာဆောင်သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုမြင့်မားကွာရှင်းမှုနှုန်းနှင့်အနိမ့်အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်မီအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြသူစုံတွဲများ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမီအိမ်တော်ကိုကစားသူကိုစုံတွဲများအထူးသဖြင့်ကိန်းပေါ်ပြီးသားနေကြတယ်. သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်များကိုစမ်းသပ်တူခံစားလျှင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်သည်လက်ျာတဦးအတူမဖြစ်ကြ၏. ကစားသို့လာနိုင်သည်ကိုနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြေရှင်းအယူအဆဖြစ်ပါသည်. စုံတွဲများ, ဒီနေ့ခေတ်, ချိန်းတွေ့ဖြစ်စဉ်တွင်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအဖြစ်အတူတကွနေထိုင်သောကုသ. သူတို့ကအတူတကွနေထိုင်ခြင်းစတင်ပြီးတာနဲ့, သူတို့အဖြစ်ငွေရေးကြေးရေးအတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်လောက်ရှာပြီးစိတ်ခံစားမှုသူတို့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြ.